Orbit Downloader 4.1.1.0 Free...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Orbit Downloader 4.1.1.0 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! 2012 မှထွက်တဲ့ Free Version လေးဖြစ်သောကြောင့် သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! သုံးရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်...! Internet Explorer, Opera, FireFox Google Chrome and Maxthon တို့မှာလည်း သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! နောက်ထပ် Update လေးတွေထွက်လာရင် ကျွန်တော် တင်ပေးသွားပါမည်...! Windows 2000, XP, Vista,7တို့မှာ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! အသုံးလိုရင်တော့ mediafire လေးဖြင့် အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်...!
"Available Features in Orbit Downloader ":
# Megaupload, Badongo, depositfiles, Filefactory, etc. Support for popular file-sharing services
# Service YouTube, Google, MySpace, Metacafe, Dailymotion flv format video download
# Service Pandora, Yahoo, MySpace, Imeem, Radioblogclub, Lala, etc. audio download in MP3 format
# Protocol HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP and RTMP on
-# Intenet Explorer, Firefox, Opera, Maxthon integration with
# Multi-threaded download
# Time work
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 4.44 MB )
No Response to "Orbit Downloader 4.1.1.0 Free...!"